Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Olol: Dab xoog leh ayaa ka kacay Madaarka Kabul
Wax yar baa laga ogyahay sida uu dabku u culus yahay iyo meesha uu ka yimid, laakiin fiidiyowyo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq cirka isku shareeray oo ka soo baxaya garoonka diyaaradaha, kaas oo xuddun u ahaa dadaallada daadgureynta Mareykanka iyo reer galbeedka toddobaadkii la soo dhaafay.
Dabka ayaa laga soo sheegay gegida dayuuradaha ee Hamid Karzai.
Qiiq aad u weyn ayaa ka kacay garoonka diyaaradaha.
Xaaladda amni ee garoonka ayaa weli ah mid jilicsan.
Dab aad u xooggan ayaa sida muuqata ka kacay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kabul ee Hamid Karzai ee Afgaanistaan, iyadoo ay socdaan daad -gureyn fowdo ah oo ay kumannaan qof ka quusanayaan inay ka baxaan dalka.
Warka dabka ayaa soo baxay fiidnimadii Isniinta waqtiga maxalliga ah. Wax yar baa laga ogyahay sida uu dabku u culus yahay iyo meesha uu ka yimid, laakiin fiidiyowyo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq cirka isku shareeray oo ka soo baxaya garoonka diyaaradaha, kaas oo xuddun u ahaa dadaallada daadgureynta Mareykanka iyo reer galbeedka toddobaadkii la soo dhaafay.
Xaaladda amni ee garoonka ayaa weli ah mid jilicsan, iyadoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah ay ku howlan yihiin inay kumanaan shacabkooda ah iyo qaxooti reer Afgaanistaan ​​ah ka daad gureeyaan Kabul. Saacado ka hor inta uusan dabku bilaaban, ciidamada Mareykanka iyo kuwa Jarmalka ayaa dagaal fool ka fool ah la galay dabley aan la garaneyn, is -weydaarsiga rasaasta ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo reer Afghanistan ah. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay garoonka diyaaradaha toddobaadkii la soo dhaafay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan NATO.
Ma cadda waqtiga qoritaanka in dabku uu saameynayo duulimaadyada taga ama ka soo dega garoonka. Duulimaadyadu waxay si aan kala joogsi lahayn uga dhoofayeen gegida dayuuradaha, iyadoo maamulka Biden uu ku andacooday inay ku daadgureeyeen ku dhawaad ​​11,000 oo qof 36 saacadood gudahood. Si kastaba ha ahaatee, kumanaan kale ayaa weli ku harsan Kabul, waxaana su’aal ka taagan tahay suurtagalnimada in Mareykanka iyo xulafadiisu ay la kulmaan waqtiga kama dambaysta ah ee 31 -ka Ogosto.
Taalibaan, oo xoog kula wareegtay Afgaanistaan ​​wax ka badan toddobaad ka hor, ayaa ka digtay “cawaaqib” haddii aan waqtiga loo qabtay la fulin.